35 kukurudzira zvinotsanangurwa nezveyoga | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Maria Jose Roldan | 03/05/2021 19:05 | Yakagadziridzwa ku 30/04/2021 15:14 | Mitsara
Kune vanhu vazhinji, ivo havapi yoga iyo kukosha kwayo kwakakodzera. Muchokwadi, kune vanhu vanoti kana vachizviedza uye voziva kuti kuranga kupi kunounza kuhupenyu hwavo, havagone kurega kuzviita. Kune izvi zvese, Isu tichaenda kukuudza nezve mamwe ekukurudzira makotesheni nezveyoga.
Nekuti nenzira iyi, iwe unozogona kunzwisisa ichi chirango uye zvese izvo zvinounza kwauri. Iwe unozogona kuratidza nekufungisisa nekutenda kumitsara iyi uye unzwisise kuti iyo yoga isiri chete "chimwe chinhu" chinoitwa nevamwe vanhu, asi irango rose kubatanidza muviri nepfungwa. Sezvo iri zvakare inofungidzirwa semitambo kana uchishanda masuru emuviri.
Aya marudzi emitsara zvakare anounza kwauri kukosha kwekutsvaga chiyero pakati pemuviri nemweya, nekuti zvese zvakabatana uye nekutarisira chimwe, unofanirwa kutarisira chimwe. Zvinobatsira kudzidzisa muviri uye zvakare ku zorora pfungwa. Chinhu chakakosha mukushanda chaiko kwemuviri wemunhu.
Yoga inokupa iwe mabhenefiti makuru sekureba sekunge iwe uchidzidzira izvi nguva dzose nekuti hausi mutambo chete, kuti uwane mibairo yakanaka inofanirwa kuve nzira yehupenyu kwauri. Nenzira iyi iwe uchauya kune wako.
Muchokwadi, kuti ukwanise kuita yoga iwe haungofanirwe kugona kumira kana asanas nemazvo, asi zvakare iwe unofanirwa kutevedzera zvirevo zvacho zvekufema uye zororo repanyama uye repfungwa. Ipapo chete ndipo paunowana iwo ese masimba epfungwa awakaviga kumwe mukati mukati mako.
Iwe unenge uine iyo-yakakosha chiyero muhupenyu hwako. Iwe uchawana iwo rugare nekutenda kune ichi chiuru chemitambo. Nei iri chiuru chemakore? Nekuti yaiitwa muIndia muzana rechitatu. BC uye yagara ichitsvaga mufaro.
Mitsara pamusoro peyoga
Aya mitsara anokuyeuchidza mamwe maratidziro ekuraira, akadai sekuti kana iwe uchida kuwana mufaro, iwe uchafanirwa kupfuura neruzivo rwemukati kutanga. Kuongorora pfungwa dzako nemanzwiro ako, kubvisa rusaruro kana kufungidzira.
Naizvozvo, chiitwa ichi hachirevi chete kuita kwakasiyana mamiriro, asi zvakare kuti pfungwa dzako ndidzo protagonist yemuviri wako. Kune zvese izvi, tinokukoka iwe kuti uverenge mitsara inotevera, nekuti kana iwe uchida iyo yoga uchavada, uye kana usati wamboidzidzira vasati vavhura musuwo mutsva munyika yako.
Dyara mbeu yemaitiro akanaka nekukasira, inokura zvishoma nezvishoma.
Kupa hakupi urombo kana kuzvidzora hakutipfumisi.
Kune avo vakaora mwoyo, vakasuruvara, padyo nekudonha kwepfungwa, iyo yoga inokwidziridza mweya.
Paunonyanya kufungisisa nemifungo yakanaka, inove nani nyika yako uye pasirese zviri mukati zvichave.
Kufungisisa kwechokwadi kuri kwekuvapo zvizere nezvose, kusanganisira kusagadzikana nematambudziko. Hakusi kutiza kubva pachokwadi.
Kuburitsa kugona kwepfungwa dzako, muviri uye mweya, unofanira kutanga wawedzera fungidziro yako. Zvinhu zvinogara zvakagadzirwa kaviri: kutanga mumusangano wepfungwa uyezve muchokwadi.
Kurarama mukuwirirana nepasi rose kurarama kuzere nemufaro, rudo uye kuwanda.
Mutumbi ndiwo musangano, mudzidzisi ari mukati.
Pasina kuwana kukwana kweiyo asana, simba harigone kuyerera.
Yoga inokutendera kuti uwane zvakare pfungwa yekuzadzikiswa muhupenyu, usinganzwe sekunge urikugara uchiedza kudzosera zvakaputsika zvidimbu pamwechete.
Hakuna bharanzi pasina rudo, uye hapana rudo rusina mwero.
Yoga inofanirwa kuitwa nehungwaru hwemusoro, pamwe nepfungwa dzemwoyo.
Kunzwisisa kushoma kunogona kungopa vamwe zivo shoma.
Mashoko ane simba rekuparadza nekuporesa. Kana mazwi ari echokwadi uye ane mutsa, anogona kuchinja nyika.
Yoga ndiwo mukana wakakwana wekuda kuziva kuti ndiwe ani
Rangarira, hazvina basa kuti wakadzika zvakadii mune poindi. Izvo zvakakosha ndezvauri zvauri kana wasvika ipapo.
Yoga haisi yekubata tsoka dzako, ndezve izvo zvaunodzidza munzira.
Iwe haugone kuita yoga. Yoga inzvimbo yakasikwa. Izvo iwe zvaunogona kuita ndeyoga kurovedza muviri, iyo inogona kuratidza kana iwe uri kuramba yako yakasikwa mamiriro.
Paunenge uchipinza mweya, uri kutora simba raMwari. Paunoburitsa mweya, inomiririra sevhisi yauri kupa pasirese.
Hupenyu hunogona chete kunzwisiswa nekutarisa kumashure, asi hunogona chete kurarama nekutarisa kumberi.
Kune avo vanozviona sevanhu vakashanduka zvikuru uye vachizvikudza pachavo, iyo yoga inoderedza kuzvikudza.
Yoga inoshandura. Kwete chete iyo inoshandura nzira yatinoona nayo zvinhu, inoshandura iye munhu anozviona.
Yoga haisi nzira yechitendero kana dzidziso kune chero tsika.
Sezvo iwe uchivavarira kudzidza, nekuzvipira tevera zvawakadzidza.
Rusununguko rwuri kusununguka kubva pamaketani ekutya uye zvishuwo.
Muviri ndiyo yako tempo. Zvichengete zvakachena uye zvakachena kune mweya unogara mairi.
Yoga inotisvitsa kunguva yazvino, iyo chete nzvimbo ine hupenyu huripo.
Imwe yemisimboti yekufungisisa uye nzira yemweya ndeyekuti kana iwe uchinge uchitaurirana nezvauri chaizvo, iwe une rugare.
Chero ani zvake anoita anogona kubudirira muyoga, asi kwete mumwe munhu ane husimbe. Chete kungoita tsika ndicho chakavanzika chekubudirira.
Shanduko hachisi chinhu chatinofanira kutya. Pane kudaro, icho chinhu chatinofanira kupemberera. Nekuti pasina shanduko, hapana chinhu pasi rino chichakura kana kubudirira uye hapana munhu pasi rino anoenderera kumberi kuti ave iye munhu wavakatemerwa.
Yoga iripo munyika nekuti zvese zvakabatana.
Semhuka, tinozadza pasi. Sevatakuri vehuMwari, isu tiri pakati penyeredzi. Sevanhu, isu tiri pakati, tichitsvaga kugadzirisa gangaidzo rekuti tingararama sei hupenyu hwedu isu tichishuvira kune chimwe chinhu chinogara nekusingaperi.
Mvura yakadzikama yegungwa inoratidza runako rwakaipoteredza. Kana pfungwa dzichiri, runako rweiye wega runoratidzwa mazviri.
Kuvimba, kujekesa, uye tsitsi hunhu hunokosha kumudzidzisi.
Kuziva pamweya ndiko kusuwa kuripo matiri tese uye kunotimanikidza kutsvaga hunhu hwedu hwehumwari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Mitsara » Makumi matatu neshanu ekukurudzira nezve yoga